Fifanakalozana sy fiverenana | Volo-bolo
CANCELLATIONS, EXCHANGES AND Retour
Izahay manamarina ny vokatra rehetra alohan'ny fandefasana azy, na izany aza, raha nisy zavatra afa-nandositra ny ekipanay ary simba ny vokatrao dia hataonay maimaimpoana ny fifanakalozana aorian'ny fandinihan'ny ekipanay. Ny vokatra rehetra dia arovan'ny fiantohana marika ary halefa hanaovana fanadihadiana.
Raha sendra diso izahay nandefa ny kaomandinao (nifanakalo ny vokatra na tsy hita) dia manenina izahay aloha ary manantona anay fotsiny hamaha ny raharaha. Amin'ity toe-javatra ity dia handefa ny vokatra marina izahay raha izao no toe-javatra tsy misy sarany, haverinay ny vola aloa na handefasanay tapakila fihenam-bidy miaraka amina vola fanampiny ianao. Raha hanaiky ny fiverenan'ny vokatra dia tsy maintsy ao anaty toe-piainana tonga lafatra izy io ary tsy misy famantarana fampiasana.